Staba Motor dia mirary soa anao rehetra nahatratra ny taona vaovao 2021!
Ny fitsipiky ny Motor Brushless DC (BLDC) sy ny fomba fampiasana tsara
The Principle of Brushless DC (BLDC) Motor ary ny fomba fampiasana marina Raha te hampiasa milina elektrika sy elektronika ny injeniera hanao zavatra amin'ny tontolo tena izy, dia hieritreritra ny fomba hamadihana ireo signal elektrika ho "hery" izy ireo? Ny actuator, izany hoe ny motera, no mamadika ny ...
Fampivoarana ireo mpankafy ny valindrihana sy ny ho avy eo amin'ny tsenan'i India
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-09-18
Ny serivisy ODM mifantoka amin'ny singa mpiorina valindrihana, Units ary vokatra vonona hampiasaina — Manomboka amin'ny tsenan'i India sy mikendry ny fanitarana ny mpiorina eran-tany no fitaovana voalohany fanamafisana ny trano ao India. Mihodina amin'ny hafainganam-pandehan'ny 300-400 RPM, ampiasaina handehanana rivotra be sy hatsiaka dir ...
Units Brushless DC Motor sy Fan Blade ho an'ireo mpankafy herinaratra
Ny fironana amin'ny fampihenana ny fanjifana herinaratra sy ny fampitomboana ny asany dia tonga amin'ny tsenan'ny mpankafy herinaratra. Staba Motor dia mamolavola vokatra izay mandray anjara amin'ireo mpankafy herinaratra avo lenta kokoa sy maivana kokoa miaraka amina toerana sy fomba maoderina. Fan moto mahomby, malefaka ary maivana indrindra ...
BLDC Motor Controller ho an'ny Power Drill, BLDC Motor Controller ho an'ny fanamainana volo, FOC BLDC Controller amin'ny fandavahana herinaratra, BLDC Controller ho an'ny fanamainana volo, FOC BLDC Controller ho an'ny fanamainana volo, FOC BLDC Motor Controller ho an'ny Power Drill, fangatahana pricelist